UGREEN M.2 NGFF Portable SSD Enclosure (6Gbps) CM238-60355 ~ ICT.com.mm
HomeUGREEN M.2 NGFF Portable SSD Enclosure (6Gbps) CM238-60355
UGREEN M.2 NGFF Portable SSD Enclosure (6Gbps) CM238-60355
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: UGREEN Model: M.2 NGFF Portable SSD Enclosure Item No: 60355 Input: USB-C Output: M.2 B-Key USB Specification: USB 3.1 GEN2 standard at transfer rate up to 6Gbps, downward... [Learn more]
Brand: UGREENSKU: 151882N/ASee more: Cables & Adapters, Deals, Gadgets & Accessories, Mobile Accessories, Products, Recent Updates, Shop, Star Universe, UGREEN, Under 100k, WarehouseFilter by: Adapters, Promotion, Warehouse
Model: M.2 NGFF Portable SSD Enclosure
Item No: 60355
USB Specification: USB 3.1 GEN2 standard at transfer rate up to 6Gbps, downward compatible with USB 3.0/2.0/1.1
2 TB Large Capacity
Supports hard drive: 2230/2242/2260/2280 M.2 NGFF SATA SSD of B-Key or M+B Key
Supports Windows/Mac OS/Linux/Chrome OS
Dimensions: L122 x W40 x H12(mm)
M.2 SATA NGFF SSD အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ UGREEN အမှတ်တံဆိပ် M.2 SSD Enclosure ဖြစ်ပါတယ်။ SSD တွေကို Laptop၊ PS4၊ Xbox စတဲ့ Devices တွေကို ပြင်ပကနေအလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ B-Key (သို့) M+B Key ပါဝင်တဲ့ 2230/2242/2260/2280 M.2 NGFF SATA SSD တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုပမာဏ 2TB ရှိတဲ့ SSD တွေထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ USB 3.1 Gen2 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဒေတာကူးပြောင်းမှုက အရမ်းကို မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပြီး 6Gbps အထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ USB 3.1 နှင့်သာမက USB 2.0/1.1 တို့နှင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Windows/Mac OS/Linux/Chrome စတဲ့ OS စနစ်တွေအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (၅၀)စင်တီမီတာ အရှည်ရှိတဲ့ ဒေတာကေဘယ်ကြိုးတစ်ချောင်းပါဝင်ပါတယ်။ အလူမီနီယမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ပေါ့ပါးမှုရှိပြီး အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အပူမြင့်တက်မှုကိုအလျင်အမြန်လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ SSD Hard Disk တွေကို အပူရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အိတ်ဆောင်အရွယ်အစားဖြစ်တာကြောင့် မိမိရဲ့ အိတ်ကပ်(သို့) Laptop အိတ်အတွင်းမှာတောင်ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Pass 1G file in 1 second.
As the main control chip, ASM1153e is equipped with SATA NGFF protocol for high-speed transmission.
Support four hard drives of different sizes: 2230, 2242, 2260, 2280.
Support USB interface device connection.
All-aluminum light-weight shell, fast heat dissipation, protect the hard disk.
Small size, you can carry it with you, put it in your pocket, backpack, etc.
Total price:K28,900 K11,600
This item: UGREEN M.2 NGFF Portable SSD Enclosure (6Gbps) CM238-60355 K28,900 K11,600